दार्जीलिङका 17 पार्षद भाजपामा : दार्जीलिङमा पुलिस राज चलिरहेको छ-मुकुल रोय (भिडियोसहित) - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारदार्जीलिङका 17 पार्षद भाजपामा : दार्जीलिङमा पुलिस राज चलिरहेको छ-मुकुल रोय (भिडियोसहित)
उनले मोर्चाका प्रवक्ता बीपी बजगाईँको पक्राउको सन्दर्भ पनि झिके। ‘29 मईको दिन हाम्रो गठबन्धन पार्टीका प्रवक्ता बीपी बजगाईँलाई पनि पक्रियो,’ उनले भने, ‘अचम्म त के छ भने उनलाई आर्म्स एक्ट, एटेम टु मर्डरजस्ता मुद्दा लगाइएको छ। जब की बजगाईँ निर्दोष छन्। त्यही धारा महिलाहरूमाथि पनि लगाइएको छ। म आफैले एसपी, आइजीलाई फोन गरिसकें। तर रेस्पोन्स गर्दैनन्। उनीहरूलाई दिदीको निर्देश छ, ताकी जति अत्याचार दार्जीलिङमा गरियो त्यति नै नर्थ बेङ्गालमा समर्थन पाइनेछ। यो त अन्याय हो। हामी शीघ्र नै दार्जीलिङमा रङ बद्लिदिन्छौं। यो त नमूना मात्र हो।’
सिलगडी, 8 जुन
दार्जीलिङ नगरपालिकाको वर्तमान बोर्डविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको माग गर्दै नगराध्यक्ष प्रतिभा तामाङ राईलाई ज्ञापन सुम्पिने १७ नगरपार्षद् शनिवार भाजपामा सामेल भएका छन्। आज दिल्लीस्थित भाजपाको पार्टी मुख्यालयमा दार्जीलिङ नगरपालिकाकाका नगरपार्षद् नमन राईको नेतृत्वमा उनीहरू भाजपामा सामेल भएका हुन्। यसअवसरमा भाजपाका बङ्गाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, दिग्गज नेता मुकुल रोय र दार्जीलिङका सांसद राजु विष्ट पनि विशेष रूपले उपस्थित थिए।
२९ मईको दिन दार्जीलिङ नगरपालिकाको वर्तमान बोर्डविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको माग गरेलगत्तै दार्जीलिङबाहिर थिए भने बुधवार उनीहरू दिल्ली पुगेका थिए। यी १७ नगरपार्षद् आज भाजपामा सामेल भएलगत्तै दार्जीलिङ नगरपालिका अब भाजपाको कब्जामा रहेको मुकुल रोयले दाबीसमेत गरेका छन्। दार्जीलिङको 32 नगरपालिका सिटमा एकजनाको देहान्त र एकजनाले राजिनामा दिएका छन्। अहिले 30 सिट मात्र रहेको दार्जीलिङ नगरपालिकाका 17 पार्षदहरू भाजपामा सामेल बनेलगत्तै दार्जीलिङमा भाजपाको लहर देखापर्ने सम्भावना बढेको छ।
रोयले दार्जीलिङ नगरपालिकामा भाजपा बहुसंख्यक बनेको बताउँदै ममता व्यानर्जीले दार्जीलिङमा पुलिस राज चलाइरहेको बताए। ‘ममताको सरकारले पुलिस लगाएर दार्जीलिङमा आतङ्क मच्चाइरहेको छ। त्यहाँ पुलिस राज चलाइरहेको छ। केहीदिनमा नै कैलास विजय बर्गीयको उपस्थितिमा भाजपाले दार्जीलिङमा विराट प्रदर्शनी गर्नेछ,’ रोयले भने, ‘विधानसभा चुनाउपछि बङ्गालमा ममता विपक्ष बन्नेछ।’
यता दार्जीलिङका सांसद राजु विष्टले आफ्नो क्षेत्रका अत्याचारहरू मिडियसित राखे। ‘मेनस्ट्रीमका मिडिया दार्जीलिङ जान अनिवार्य छ। त्यहाँ भएको अत्याचार भारतभरि उजागार गर्न अनिवार्य छ। दार्जीलिङमा पुलिसको आतङ्क जारी छ। हिजो पनि एक महिलालाई पक्रिए,’ उनले भने, ‘जुन कुरा दार्जीलिङमा राख्न सकिन्थ्यो, त्यो बताउन दार्जीलिङका 17 पार्षदलाई दिल्ली आउनु पऱ्यो। यसैबाट बुझ्नुहोस्, दार्जीलिङको अवस्था कस्तो होला।’
उनले दार्जीलिङले 20 हजार करोडभन्दा धेर राजस्व बङ्गाललाई दिने अनि बङ्गालकै कुल बजेट वार्षिक 85 हजार करोड रहेको जनाउँदै भने, ‘तरै पनि दार्जीलिङमा सबैभन्दा धेर अत्याचार छ। चुनाउको बेला म दार्जीलिङ गएँ। मैले जुन अत्याचार देखें, त्यो अझ त्यति कै छ।’
यसैबीच उनले मोर्चाका प्रवक्ता बीपी बजगाईँको पक्राउको सन्दर्भ पनि झिके। ‘29 मईको दिन हाम्रो गठबन्धन पार्टीका प्रवक्ता बीपी बजगाईँलाई पनि पक्रियो,’ उनले भने, ‘अचम्म त के छ भने उनलाई आर्म्स एक्ट, एटेम टु मर्डरजस्ता मुद्दा लगाइएको छ। जब की बजगाईँ निर्दोष छन्। त्यही धारा महिलाहरूमाथि पनि लगाइएको छ। म आफैले एसपी, आइजीलाई फोन गरिसकें। तर रेस्पोन्स गर्दैनन्। उनीहरूलाई दिदीको निर्देश छ, ताकी जति अत्याचार दार्जीलिङमा गरियो त्यति नै नर्थ बेङ्गालमा समर्थन पाइनेछ। यो त अन्याय हो। हामी शीघ्र नै दार्जीलिङमा रङ बद्लिदिन्छौं। यो त नमूना मात्र हो।’
उनले दार्जीलिङको जनमत भाजपा, गोरामुमो र गोजमुमोसित रहेको दाबी गर्दै भने, ‘जिटिएमा इलेक्टेड होइन सेलेक्टेड मान्छे छन्। दिदीले राखेका। उनीहरूले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिइनुपर्छ। किन भने उनीहरू त्यहीँ बसेर जनतालाई अत्याचार गर्दैछन्। जिटिएमा राज्य र केन्द्र गरेर वार्षिक6सय करोड रुपियाँ जान्छ। सबैमा धाँधली छ। त्यसबारे पनि अडिट होस्।’
यता विजयवर्गीयले पनि आफूहरूले बङ्गालमा 18 सिट जितेलगत्तै ममता व्यानर्जीको व्यावहार असामन्य बनेको ठहर गरे। ‘प्रधानमन्त्री, सुप्रिम कोर्ट, चुनाउ आयोग, नीति आयोग होस् कुनैलाई पनि उनी मान्न तयार छैनन्,’ उनले भने, ‘हिजो त तुगलघीय फर्मान पनि गरिन्। भाजपाले बङ्गालमा कुनै विजय उत्सव गर्न नपाउने भनेका छन्। गणतन्त्रमा जनतालाई आभार व्यक्त गर्ने परम्परा छ, त्यसमा पनि रोक लगाएकी छन्। धन्यवाद कार्यक्रम गर्दा लाठी चार्ज भइरहेको छ। सरकार अप्रजातान्त्रिक कार्यको विरोध गर्छु।’
सांसद राजु विष्टले उठाए बीपी बजगाईँको पक्राउबारे प्रश्न। दार्जीलिङ नगरपालिकाका 17 पार्षद भाजपामा सामेल। मुकुल रोय, कैलास बिजय बर्गीय र राजु विष्ट उपस्थित। -केही दिनमा भाजपाले दार्जीलिङमा विराट प्रदर्शनी गर्ने मुकुल रोयले घोषणा गरे। राजु विष्टले राष्ट्रीय मिडियालाई पहाड गएर यथार्थ बुझ्ने अनुरोध गरे। सुन्नुहोस्, के भने त भाजपा नेताहरूले?
Gepostet von खबर म्यागजिन am Samstag, 8. Juni 2019